फुट र जुटको राजनीतिबाट गुज्रिएको राजपामा रडाको झनै चर्कियो ! « OSBreak
फुट र जुटको राजनीतिबाट गुज्रिएको राजपामा रडाको झनै चर्कियो !
काठमाडौं । फुट र जुटको राजनीतिबाट अघि बढेका मधेस केन्द्रित विभिन्न छ राजनीतिक शक्ति मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) यतिखेर पार्टी संगठन सुदृढीकरणको अभियानमा लागेको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
दुई वर्षअघि (२०७४ वैशाख ८ गते) पार्टी एकता घोषणा सभामा नेताको गर्जन र पार्टी कार्यकर्ताको जति उत्साह थियो, अहिले निराशातर्फ उन्मुख हुँदै छ । पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई चिर्दै परिपक्क नेतृत्व प्रदान गर्न नसक्दा राजपाभित्र अहिले रडाको मच्चिएको छ । संविधान संशोधनलगायत मुद्दामा संघर्ष गरेको राजपाले आफ्नो एजेन्डामा अडिग रहन त सकेन नै बरु सरकारमा सामेल भएर पनि टिकेन ।
नेतृत्वको महत्वकांक्षी र परिपक्क एजेन्डाको अभावमा राजपा रुमलिन पुग्यो । दुई वर्षको अवधिमा पार्टी जहाँको त्यही रह्यो । पार्टीकै केही असन्तुष्ट पक्षले पार्टी नै परित्याग गरी भिन्न मोर्चाबन्दी गरे । पार्टीको स्पष्ट कार्यदिशालाई स्थापित गर्न नसक्दा राजपा आफैँ रुमलिएको छ । नेता कार्यकर्तामा सन्त्रास पैदा भएको छ । गाउँ, वडा र जिल्ला तहदेखि केन्द्रीयस्तरमा नेता कार्यकर्ताबीच राम्रो तालमेल छैन । पार्टीको एकताको महाधिवेशन घोषणा गरे पनि त्यसलाई विभिन्न बहानामा लम्ब्याउने चालबाजी भइरहेको छ ।
पछिल्लो उदाहरणको रूपमा यही वैशाख ७, ८ र ९ गतेका लागि पार्टीको घोषित महाधिवेशन स्थगनलाई लिन सकिन्छ । महाधिवेशनका लागि तयारी नपुगेको भन्दै राजपाले महाधिवेशन स्थगित गरेको थियो । पार्टीको पदाधिकारी समितिले महाधिवेशनको मिति तोक्ने निष्कर्ष निकाल्दै केही साताअघि राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकबाट निर्णय भएको थियो ।
उक्त निर्णयअनुरूप राजपाको पदाधिकारी समितिको आइतबारदेखि जारी बैठकमा पुनः महाधिवेशन गर्ने या नगर्ने सम्बन्धमा नेताबीच मत बाझिएको छ । अध्यक्ष मण्डलका बहुमत सदस्य एकता महाधिवेशनको पक्षमा रहे पनि केही सदस्य नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राद्रेका छन् ।
सोमबारको बैठकमा राजपा अध्यक्ष मण्डलका ६ जना सदस्यको बोल्ने क्रम सकिएको छ । राजपाका एक पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरतसिंह भण्डारी, नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो एकता महाधिवेशनको पक्षमा छन् भने राजकिशोर यादवले नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । यता महेन्द्रराय यादव र अनिल झा महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छन् । बैठकमा संयोजक भण्डारीले महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया एवं तिथि, मिति निर्धारणसहितका पाँचबुँदे एजेन्डा बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
महाधिवेशन सम्बन्धमा राजपाले दुई–दुई विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । जसमा नियमित महाधिवशेन गाउँ, वडादेखि जिल्लामा चार महिनाभित्र गर्ने वा पार्टी एकताको महाधिवेशन एकदेखि डेढ महिनाभित्र गर्ने भन्नेबारे प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्तै संयोजक भण्डारीको प्रस्तावमा समसामयिक राजनीतिक र पार्टीको भावी कार्यदिशा, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समीक्षा तथा आगामी काम कारबाही कसरी प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव छ ।
बैठकमा पार्टीको एकीकरण, मोर्चा र गठबन्धनसँग एकताको पहललगायत विविध प्रस्ताव प्रस्तुत भएको राजपाले जनाएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन कायम गर्न नसकेको राजपाले एकताको महाधिवेशनसँगै अन्य मधेस केन्द्रित राजनीतिक शक्तिसँग पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
पदाधिकारी समितिको बैठकमा उक्त विषयले प्रवेश पाए पनि राजपाभित्रै बेमेल रहेकाले उक्त प्रक्रियाले सार्थकता पाउने या नपाउने भन्ने अन्योल नै छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग एकीकरणका लागि दुई चरणमा पत्राचार आदन–प्रदान भइसकेको छ । तथापि, पार्टी एकीकरणको प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन् ।
यतिखेर राजपा महाधिवेशनको संघारमा उभिएको छ । केही महिनाअघि वर्तमान सरकारलाई दिएको पार्टीको समर्थन फिर्ता लिएको राजपाले पुनः फर्किने वा एजेन्डामा केन्द्रित हुने भन्नेबारे अलमलमै छ । अर्कोतर्फ आफ्ना मुद्दामा विचार मिल्ने शक्तिसँग गठबन्धन गरी संघर्षमा जाने बताएको राजपा आफैँभित्रको तालमेल मिलाउन सकेको छैन ।
विशेष अधिवेशन गर्ने कि, पूर्ण महाधिवेशन गर्ने त्यसको विषयमा पनि पदाधिकारी बैठकले निर्णय लिनेछ । बैठकमा देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल गर्नाका साथै स्थानीय र प्रदेश सरकारको कामकारबाहीका बारेमा समीक्षासमेत हुने अध्यक्षमण्डलका संयोजक शरतसिंह भण्डारीले बताए ।
महाधिवेशन नहुञ्जेल राजपामा हरेक दुई महिनाभित्र संयोजक तोकिने प्रावधान रहेको छ । राजपाका १७ जना प्रतिनिधिसभा र दुई जना राष्ट्रियसभामा गरी जम्मा १९ सांसद छन् । तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी, महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सद्भावना पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) र शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी मिलेर राजपा गठन भएको थियो ।